Zinedine Zidane Wuxuu Difaacay Qaab Ciyaareedka Kooxdiisa Xili Uu Afka Furtay Oo Weerarna Ku Qaaday Kooxda Barcelona. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Zinedine Zidane Wuxuu Difaacay Qaab Ciyaareedka Kooxdiisa Xili Uu Afka Furtay Oo Weerarna Ku Qaaday Kooxda Barcelona.
Zinedine Zidane ayaa difaacay qaab ciyaareedka kooxdiisa, waxaanu ku dooday in hannaankiisa tababarenimo iyo sida ay kooxdiisu isbeddelka weyn u samaysay aanay ahayn kuwo mudan in la canaanto.
Real Madrid ayaa gool uu u dhaliyey Nacho Fernandez kaga adkaatay Real Valladolid Axaddii, waxaana inta badan xilli ciyaareedkan ay kooxdu ku tiirsan tahay goolasha ay dhaliyaan difaaca iyo khadka dhexe, halka weerarka oo Karim Benzema uu ku kaliyeystay ay yihiin kuwo ay goolashoodu aad u hooseeyaan.
Guusha usbuucan ay gaadheen waxay Los Blancos saddex dhibcood kaga sare martay Barcelona oo ay hoggaanka kala wareegtay, balse dhibaatada jirta ayaa waxay in lixdii gool ee horyaalka ee sannadkan 2020 ay dhalisay Real Madrid aanay dhamaantood ka imanin weerarka.
Laakiin Zidane waxa uu ku faraxsan yahay in kooxdu ay qaybsatay masuuliyadda goolasha oo meel walba ay ka imanayaan xiddigaha guusha ku hoggaaminaya, isaga oo dhinaca kalena weerar ku qaaday Barcelona oo guul-darro kala kulantay Valencia, laakiin samaysay rikoodh baasas ah kulankii Granada ee toddobaadkii hore.
Zidane oo ku halqabsanaya dhibaatada Barcelona iyo sida aanay baasaska badan ee ay sameeyaan waxba ugu tarin, waxa uu yidhi: “Ilama aha in Bernabeu laga ogolaanayo in aanu samayno kun baas annagoon hal mar goolka tooganin.”
Tababare Zidane waxa uu intaas kaddib ka hadlay kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Cid walba waxya leedahay qaab ciyaareed u gaar ah, ANigu waxaan kasoo ciyaaray Bernabeu waxa ay taageereyaashu doonayaan in kooxdooda ay ka arkaanna waa in wax walba oo kaaraankooda ay garoonka dhexdiisa ka sameeyaan, sidaas ayaanay ahaan jirtay. Marka jamaahiirtu dhididka ciyaartoyga ka arkaan shaadhkooda, waa waxa ugu muhiimsan dhamaadka sababtoo ah mar walba ma guuleysan kartid.”
Zidane waxa uu tilmaamay in ay nasiib u ahayd inuu tababare u noqdo Real Madrid oo ay joogaan ciyaartooyo wanaagsan, waxaanu yidhi: “Anigu mar walba hadal isku mid ah ayaan idhaahdaa, mana beddelayo Shayga ugu muhiimsan ee kooxdani isiisay waa fursadda aan ku tababarayo ciyaartoyga Waa koox wanaagsan, aniguna nasiib ayaan u yeeshay inaan halkan joogo Labadii bilood ee tegay, si fiican wax noogumay soconin waxaana jirtay dhalleecayn taasina maaha mid isbeddelaysa. Waxa aanu doonaynaa inaanu sii wadno waxa aanu qabanayno.”
Real Madrid lagama adkaanin 19 ciyaarood dhamaan tartamada xili ciyaareedkan, laakiin caawa ayay safar ugu tegayaan Real Zaragoza oo ay lasoo ciyaarayaan wareegga 16ka tartanka Copa del Rey oo Los Blancos ay laba jeer oo kaliya ku guuleysatay intii ka dambaysay 1993-kii, waxaanu Zidane doonayaa in markan uu jabiyo xaydaabkaas.
Zidane waxa uu sheegay inay doonayaan inay beddelaan taariikhda Copa del Rey, waxaanu yidhi: “Ilama aha inay tahay dhiirigelin la’aan, waana inaanu aqbalno in Madrid ay 13 jeer ku guuleysatay Champions League, isla markaana aanu doonayno inaanu beddelno taariikhda Copa del Rey.
“Zaragoza way nagu adkayn doontaa, anaguna wax walba waanu isku dayi doonaa garoonka dhexdiisa, nagamana yaabin karaan sababtoo ah waanu ognahay inay adkaan doonto sidii ay mar walba ahaan jirtay.”
Kulan Ciyaareed Xiiso Badan Oo Garoonka Xawaadle Ka Qabsoomi Doona Galabta?